သင့်ရဲ့ Travels အရှိဆုံး Making | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > သင့်ရဲ့ Travels အရှိဆုံး Making
သင့်ရဲ့ Travels အရှိဆုံး Making
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 24/04/2020)
ခရီးသွားလာအားလုံးရှာဖွေစူးစမ်းအကြောင်း, ယင်းမှစကားပြော ဒေသခံတွေ, ဒေသခံအစာစားခြင်း အစာ နောက် ... ပြီးတော့. နိုင်ငံတိုင်း အရွယ်အစားနဲ့ပုံသဏ္ဍာန်အတွက်ကွဲပြားခြားနားခြင်းနှင့်နောက်ထပ်ဖြစ်ပါသည်, တိုင်းပြည်၏အရွယ်အစားပေါ် မူတည်., ဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်သို့မဟုတ်ကွဲပြားခြားနားသောပြည်နယ်များသို့ခွဲခြားမရစေခြင်းငှါ,. ထိုအခါပြည်နယ်များထပ်မံခွဲခြားထားပါသည် မြို့ကြီးများ. ခရီးသွားလာခြင်းနှင့် ရှာဖွေစူးစမ်း ထိုမြို့ကိုသင်ဖြစ်ကောင်းလမ်းညွှန်စာအုပ်လေးတွေနဲ့အတွက်တွေ့ပြီဘယ်တော့မှမယ်လို့အလှတရားတစ်ခုထပ်တိုးအဆင့်ကိုပေးသည်. အခြားအကြိမ်သငျသညျခရီးသွားဘို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ကာလအတွင်းရှိစေခြင်းငှါများနှင့်ဦးစားပေးအဖြစ်အချို့သောမြို့ကြီးများစူးစမ်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်နှင့်တိုင်းပြည်ရန်နောက်ထပ်ခရီးစဉ်အရာကြွင်းလေစောင့်ရှောက်ကြလိမ့်မယ်. တစ်ခုခုကိုအမှု၌, တစ်ဦးရှိခြင်း ဒေသခံရထားလက်မှတ်ဘွတ်ကင် ကြိုတင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်နိုင်ပါတယ်; သငျသညျနောက်ဆုံးမိနစ်အစီအစဉ်များအောင်အချိန်ဖြုန်းရန်မလိုပါနိုင်အောင်.
ဒေသဆိုင်ရာ မီးရထားလက်မှတ်ဘွတ်ကင် သငျသညျဥရောပတလွှားခရီးသွားလာနေသောအထူးသဖြင့်လာသောအခါလုံးလုံးတစ်ဦး enthralling အတွေ့အကြုံကိုဖြစ်သက်သေပြနိုင်. ဒါပေါ့, အဲဒီမှာတခြားနည်းလမ်းတွေဖြစ်ကြပြီးသွားလာရန်ကိုဆိုလိုပါသည် - သငျကားများအားဖြင့်သွားလာနိုင်ပါတယ်, သို့မဟုတ်ဘတ်စ်ကားသို့မဟုတ်ပင်လေယာဉ်ကကိစ္စများအတွက်. အဆိုပါ ဘတ်စ်ကားခရီးသွား အတော်လေးမသက်မသာဖြစ်နိုင်ကြောင်းနှင့်လေယာဉ်သည်မိုဃ်းကောင်းကင်နှင့်မိုဃ်းတိမ်ကိုစီးလွဲပြီးအမြင်မဆိုမျိုးကိုပူဇော်ကြဘူး. ထို့ကြောင့် လေယာဉ်စီး အတော်လေး detaching နိုင်ပါသည်. အခြားတွင် လက်ကကား, စီးကြောင်းအလွယ်တကူမရရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်. ထို့ကြောင့်ဒေသခံတစ် ဦး ရထားလက်မှတ် ဒါကြောင့်ဥရောပတလွှားသွားလာမှကြွလာသောအခါဘွတ်ကင်ရုံမှန်သောစကားကိုပြန်ပြောပါလိမ့်မယ်.
ဒါကြောင့်တစ်ဦးတည်းသို့မဟုတ်အုပ်စုတစ်စုအတွက်ဖြစ်, တစ်ဦး ရထားခရီး တစ်ခုအတိုင်းအတာအထိအလွန်လုံခြုံနှင့်ပင်ရင်ခုန်စရာဖြစ်လေ့ရှိတယ်. ဒေသခံတစ်ဦးရထားလက်မှတ်ဘွတ်ကင်အသုံးပြုခြင်းအကြောင်းအကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကသင်မှစသောအပြောင်းအလဲစီမံခန့်ခွဲရန်ခွင့်ပြုသည်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ အွန်လိုင်းမှကြိုတင်စာရင်းသွင်း အဖြစ်နှင့်အခါသင်လိုအပ်. အခြားအင်္ဂါရပ်မြို့ကြီးများအကြားရထားရွေ့လျားအဖြစ်အားလုံးသငျသညျပတျဝနျးကငျြရှိသာယာလှပခြင်းနှင့်စိတ်ကိုဖမ်းစားသဘောသဘာဝထွက်စစ်ဆေးနေမည်ဖြစ်ကြောင်း. သူကတောင်ဝေးအားလုံးကိုသင့်ထံမှသင်တို့ဆွဲယူခြင်းဖြင့်ဒစ်ဂျစ်တယ် detoxification ယူရန်သင့်အားစုံစမျးစခွေငျးငှါ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းတွေ.
သငျသညျရောက်နေတယ်ဆိုရင် တစ်ဦးတည်းခရီးသွား, သငျသညျ Self-ရောင်ပြန်ဟပ်ပင်နှင့်သင်ကိုယ်တိုင်နှင့်အတူအချို့သောအရည်အသွေးကိုအချိန်ဖြုန်းဖို့ဒီအချိန်ကိုသုံးနိုင်သည် သင့်ရဲ့ဂျာနယ်မှာရေး မင်းလိုချင်တယ်ဆိုရင်. သင်တို့ပတ်လည်အရာအားလုံးကို၏ရုပ်ပုံများကိုယူ. သင်၏ခရီးအတွက်ဒေသခံရထားလက်မှတ်ကြိုတင်ဘွတ်ကင်ကိုရရှိနိုင်သည့်အချိန်တိုင်းတွင်ရှိကောင်းရှိလိမ့်မည်. ၎င်းကိုအပြည့်အဝအသုံးချပြီးသင်နှင့်အတူအမှတ်တရများများစွာယူဆောင်လာသည် အတွေ့အကြုံများ.
စကားများမှာဖော်ပြထားတဲ့မရနိုင်သည့်အတွေ့အကြုံကိုဖြစ်ပါတယ်ခရီးသွားလာ. ဒါဟာကိုယျ့ကိုယျကိုမှ "ကွောကျရှံ့" အချက်တစ်ချက်ကထပ်ပြောသည်, ကွာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ရှူယူရာ. ကျွန်တော်တို့ဟာကိုယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းသာမန်ဘဝတွေကိုနေထိုင်နေကြအထူးသဖြင့်ဤတွေ့ကြုံခံစားသောဘဝ၌အလွန်ထိုကဲ့သို့သောအချိန်လေးတဲ့အခါ. သင်ကခရီးသွားလာ start ယခုအချိန်တွင်သင့်ရဲ့အမြင်နှင့်ကျွန်တော်လုံးဝဘဝကိုကြည့်လမ်းကိုပြောင်းလဲ. ဒါဟာအစကျွန်တော်တို့ကိုအသက်တာ၏နေ့စဉ် Hustle နှင့်ပျားပန်းခပ်လှုပ်ရှားရာမှကိုယျ့ကိုယျကိုသဖြင့်အချိန်ကွာဖြုန်းဖို့အခွင့်အလမ်းကိုပေးတော်မူ၏. ဒါကတစ်သက်တာအတွေ့အကြုံကိုအတွက်တစ်ချိန်ကဖြစ်ပြီးသင်ကအများဆုံးလုပ်ကြောင်းသေချာစေရန်ပိုကောင်းမယ့်. သင့်ရဲ့ခရီးသွားစီစဉ် ကောင်းစွာနှင့်ဒေသခံတစ်ဦးရထားလက်မှတ်ဘွတ်ကင်ကြိုတင်ကောင်းမွန်စွာပြုကြပြီ.
သင်သည်သင်၏ခရီးသွားမှတ်တမ်း၏အရှိဆုံးပြုလုပ်ခြင်းဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား? ကိုသွားပါ တစ်ဦးကရထား Save နှင့်သင့်မိမိကိုယ်ကိုရထားခရီးသွားခြေထောက် add.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသားယူနိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေနဲ့ ကိုယ့် link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးပေး ဤ blog post မှ, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/making-the-most-of-your-travels/ - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml, သငျတို့သ / fr ဖို့ / က de ပြောင်းလဲခြင်းသို့မဟုတ်နိုင်ပါတယ် / ကြောင်းနှင့်ပိုပြီးဘာသာစကားများ.
#traveleurope #ခရီးသွားမှတ်တမ်း eurotrip ရထားခရီးစဉ် ခရီးသွား
23 သင်ကနယ်လှည့်မဖြစ်မီ Download လုပ်ဖို့လိုအပ် Apps ကပ
ရထားဘဏ္ဍာရေး, ရထားခရီးသွားခြင်း, ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား, ဥရောပခရီးသွား